တိုက်ခန်း - mya kan thar condo အရောင်း Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
တိုက်ခန်း classified: Mya Kan Thar Condo အရောင်း
#လှိုင်မြို့နယ်_မြကန်သာအိမ်ရာရှိစျေးနှုန်းသင့် 🏢 Mya Kan Thar Condo အရောင်းခန်းလေးနဲ့ မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်🙏🙏🙏 🔰 အကျယ်အဝန်း( 650 - Sqft ), 6_Floor. 🚩 2_Bedroom, ကြွေပြားခင်း၊ ပြင်ဆင်ပြီး။ 🌈 Air Con (3) လုံး၊ နေရာကောင်း။ 🏊 Swimming pool 🚘 (1) Car parking & (24)Hour security. 💰 စျေးနှုန်း_၁၁၀၀သိန်း #ဘဏ်ချိတ်ရသည်။ 📲📲📲📲📲 >>>>>>>>>>>>> 09-752 7575 47, 09-7789 69 226. 09-340 185 131, 09-250 998 522.